Fikirakirana ny DDNS ny mifamadika amin' ny alalan' ny modem + router – Taylor Lopes ツ Blog
Fikirakirana ny DDNS ny mifamadika amin' ny alalan' ny modem + router
Hanadino ny Tsia-IP sy ny DynDNS! Ataovy ny router miasa amin' ny fomba fanaovana ny tetezana sy amboarinao DDNS amin' ny DNS-O-Matic.
Fampitandremana: Ity Hafatra ity dia sasany resaka teknika horesahana hevitra.
Izany rehetra izany nanomboka rehefa tonga ny mpikirakira Hi-Technicolor TD5136v2 modem/router Wi-Fi, Ratsy Be! Nividy mba nanamarika ny router Asus RT-N56U mba hahitana raha toa ka izany nohatsaraina ny Wi-fi, fampihenana ny fahaverezan' ireo tahirin-kevitra.
Mba hanamorana ny fiainako, Ny Tambajotra cascateei, ny fametrahana ny router Asus mifandray tsara amin' ny router Technicolor. IE, niaraka tamin' ny tambajotra any an-trano 2 routers. Niasa tsara, kanefa tsy maintsy amboarinao ny NAT (seranana ianao/sampandraharaha) eo amin' ny samy routers mba hanaovako ny asako IP fakantsary any ivelany (Internet). Jereo ny ohatry ny ahoana izany ambiny:
INTERNET      > MODEM/Manahoana    > ROUTER/ASUS > AO AMIN' NY SOLOSAINA/FAKANTSARY
200.28.189.1  > 192.168.1.1 > 192.168.0.1 > 192.168.0.APARITAHO
INTERNET > MODEM/HI > ROUTER/ASUS > AO AMIN' NY SOLOSAINA/FAKANTSARY 200.28.189.1 > 192.168.1.1 > 192.168.0.1 > 192.168.0.APARITAHO
Ny olana amin' ity “gambi” tao amin' ny DDNS. Mino aho fa mahafantatra ianao hoe inona no DDNS ny, izay no antony tonga eto aho. Raha tsy izany, Manao fikarohana mikasika ny kely azafady ary tohizo ny famakiana.
Mariho fa, miaraka amin' ity cascade no, dia tsy maintsy fifehezana amin' ny Internet izay ary nanangona ny manankery IP ny modem/Hi, ny router/Asus nahazo ihany no ny fiavian' mangatsiaka avy amin' ny ny IP modem/Hi. Izany dia tena olana, satria rehefa niezaka amboarinao ny DDNS/Asus router, Nomeny ny fahadisoana manaraka ity:
"The wireless router currently uses a private WAN IP address (192.168.x.x, 10,x,x,x, na 172.16. x.x).. Io router mety ho ao anatin' ny tontolo maromaro-NAT sy DDNS ny asa fanompoana tsy hiasa ao amin' izany tontolo izany"
Ny tranonkala ao amin' ny ASUS nampitandrina mikasika io olana io:
Fanamarihana: Raha toa ka fil dia mampiasa ny adiresy IP FAHARERAHANA tsiambaratelo (192.168.x.x, 10.x.x.x, na 172.16.x.x), Hahita ity router-Raha-ny tambazotra nandray-sosona NAT. Mety tsy hiasa ao anatin' ny tontolo toy izany ny DDNS asa fanompoana
Fanamarihana: Raha toa ka fil dia mampiasa ny adiresy IP FAHARERAHANA tsiambaratelo (192.168.x.x, 10.x.x. x, na 172.16. x.x), Router ity dia hahita ny tenanao amin' ny tambajotra iray sosona maromaro mitambatra NAT. Mety tsy hiasa ao anatin' ny tontolo toy izany ny DDNS asa fanompoana
Ny vahaolana dia ny manao ny modem/Hi-miasa ao amin' ny “ny fomba fanaovana tetezana” (Ny fomba fanaovana tetezana), amin'ny teny hafa, ny modem/Hi vao lasa ny anjara asany amin' ny maha-modulator sy demodulator (ary intsony ny router), geographic rehetra ny tahirin-kevitra mikoriana avy hatrany amin' ny router/Asus. Amin' ity tranga ity, Izany dia toy ny hoe ny router mihitsy / miatrika sy Asus ny manana ny Internet, fahazoana manankery IP FAHARERAHANA sy ho tompon' andraikitra amin' ny fanaovana ny fanamarinana PPPoE. Hijery ny misy:
INTERNET      > MODEM/Manahoana     > ROUTER/ASUS > AO AMIN' NY SOLOSAINA/FAKANTSARY
200.28.189.1  > TETEZANA/TETEZANA > 192.168.0.1 > 192.168.0.APARITAHO
INTERNET > MODEM/HI > ROUTER/ASUS > AO AMIN' NY SOLOSAINA/FAKANTSARY 200.28.189.1 > TETEZANA/TETEZANA > 192.168.0.1 > 192.168.0.APARITAHO
Ny fampifandraisana ny modem sy ny router (Ny fomba fanaovana tetezana)
Ao amin' Ity Hafatra ity, Aza miresaka ny modem ny router Hi sy Asus, afaka ho mitovy amin' izany ao amin' ny modem na router ny de configuration.
Dingana 1 – Mametraka ny modem amin' ny fomba fanaovana tetezana (Ny fomba fanaovana tetezana)
Mandeha any amin' ny sehatra fanaraha-maso amin' ny modem/Hi. Izany dia natao araka ny mahazatra amin' ny fanokafana ny fijerenao internet ary manoratra http://192.168.0.1 (na IP iray hafa toy ny 192.168.1.1, 10.0.0.1, sns). Ny miseho ho azy solonanarana sy tenimiafina dia “Admin” ho an' ny samy. Handalina sy hanova ny de configuration manaraka ity:
HANAMBOATRA NY FOMBA > Internet hanamboatra ny Fomba > Toe-javatra Misy Internet > Karazana Fifandraisana amin' ny Internet > Ny fomba Fanaovana tetezana (ho solon' ny PPPoE)
Dingana 2 – Mampifandray ny câble tambajotra misy eo amin' ny modem sy ny router
Hitondra ny câble tambajotra mateti-pitranga (UTP – RJ/45) ary ampifandraiso amin' ireo fitaovana ampiasainao: mandeha ny sisiny iray amin' ny iray ilay 4 modem/Hi seranan ary ny hafa dia mandeha ao amin' ny seranan-tsambo WAN/Internet ao amin' ny router/Asus.
Dingana 3 – Amboarinao ny router ny miasa miaraka amin' ny DHCP fahafahana
Afaka mampiasa ny router fanaraha-maso ny valan/Asus. Izany dia natao araka ny mahazatra amin' ny fanokafana ny fijerenao internet ary manoratra http://192.168.1.1 (na IP iray hafa toy ny 192.168.0.1, 192.168.2.1, 10.0.0.1, sns). Ny miseho ho azy solonanarana sy tenimiafina dia “Admin” ho an' ny samy. Handalina sy hanova ny de configuration manaraka ity:
Toe-Javatra avo lenta > LAN > Config fototra > Manome fahafahana ny solosaina Foibe ny DHCP > Eny
Dingana 4 – Amboarinao ny router ny hanao ireo fanamarinana ny PPPoE
Afaka mampiasa ny router fanaraha-maso ny valan/Asus. Makà ny toe-javatra miseho manaraka ity:
Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > Config fototra > Karazana Fifandraisana FAHARERAHANA > PPPoE
Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > Fikirakirana ny Kaonty > Solon' Anarana PPP > Manahoana@Manahoana
Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > Fikirakirana ny Kaonty > Tenimiafina > oi123
#1 Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > Config fototra > Karazana Fifandraisana FAHARERAHANA > PPPoE #2 Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > Fikirakirana ny Kaonty > Solon' Anarana PPP > MANAHOANA @ HI #3 Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > Fikirakirana ny Kaonty > Tenimiafina > oi123
No Hi-faneva ity PPPoE solonanarana sy tenimiafina. Mazava ho azy fa ianao dia tokony hampiasa ny mpampiasa sy ny tenimiafina raha ny mpikirakira fitaovana samihafa iray hafa. Raha tsy fantatrao, miantso ny mpikirakira fotsiny sy mangataka ny teny fidirana ny tahirin-kevitra ho an' ny authenticating PPPoE. Manahoana telefaonina no 10631.
Nanao izany, Ho an' ny Internet mba hiara-hiasa amin' ny alalan' ny ny Wi-Fi router/Asus. Indraindray izany mety mitaky fotoana authenticate sy hampiorina ny fifandraisana, faharetana. Lazaiko izany, satria zava-nitranga tamiko izany; Nieritreritra aho hoe tsy mahomby izany ary fotsiny mahandrasa kely izany niasa. Fitsapam-pahaizana misy!
Famoronana sy configuring ny DDNS
Raha ny marina dia ny ampahany tsara indrindra amin' ilay Vongambato izany, satria tsy nahy nihaona fanompoana mahaliana iray antsoina hoe Dns-O-Matic. Mora, Manazava ny aho!
Ny olana lehibe ny routers dia manohana vitsivitsy DDNS solosaina, amin' ny ankapobeny dia voafetra Tsy-IP sy DynDNS. Kanefa manadino ny Tsia-IP sy ny DynDNS! Ireo fotoam-pivavahana dia tsy afaka tanteraka na oviana izy ireo dia, efa fetra, tahaka ny manavao rehetra 30 mandreraka izany ary andro!
Izaho manokana kokoa ny mampiasa ny Natahotra (FreeDNS), Izany asa ary tena dia afaka. Saingy ahoana no atao raha toa ka tsy manohana ny Afraid ny router? Ity no toerana DNS-O-Matic. Soa ihany fa manohana ny router Asus DNS-O-Matic, mamela anao hampifandray ny DNS-O-Matic amin' ny subdomain am-Afraid nohariana izay, fitandremana ny IP FAHARERAHANA foana navaozina. Tsy mahatakatra? Dia izany, kanefa tadidio fa tsy ho ilaina raha toa ka manana fanohanana ny DNS-O-Matic ny router.
Dingana 1 – Mamorona iray (Sub)nanatonan' amin' ny Afraid
1. fitsidihana http://freedns.afraid.org
2. Tsindrio ny "Dynamic DNS" ary hamorona kaonty amin' ny alalan' ny menu "Handrafetana ny fitantarana eto".
3. Fidirana, Tsindrio ny "Subdomains" sy "manampy"
4. Fanamarihana ao amin' ny combobox "Nanatonan'" izay, amin' ny farany, manana safidy iray "maro Maro kokoa...", Tsindrio misy!
5. Eo amin' ny efijery manaraka, Tsindrio ny rohy "Nizara Nanatonan' Haizin" ary misafidiana iray amin' ireo roa mifanojo misy an' arivony.
Dingana 2 – Fahazoana ny fanalahidy (Manan-Danja) ao amin' ny afrai.org
(Mila izany fanalahidy izany hatrany ianao!)
2. Tsindrio ny DNS Dynamic,
3. Any amin' ny faran' ny pejy, Tsindrio ny rohy “URL mivantana” ho an' ny subdomain anao dia nohariana araka ny dingana 1
4. Ny manan-danja (Manan-Danja) ny ampahany amin' ny URL avy hatrany “update.php?”.
URL mivantana: Sokajy://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa * GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
Manan-Danja (Manan-Danja): iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
URL mivantana: Sokajy://freedns.afraid.org/dynamic/update.php?iXU5V6yRRjBGa*GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf Chave (Manan-Danja): iXU5V6yRRjBGa * GTWG8yR0lBS7TRjlmOjEzMDY5NIDf
Dingana 3 – Mamorona tantara iray ao amin' ny DNS-O-Matic ary ampidiro ao anatin' ny asa fanompoana (Natahotra)
1. fitsidihana https://www.dnsomatic.com/
2. Tsindrio ny "mamorona ny tantara DNS-O-Matic maimaim-poana" ary hamorona kaonty
3. Fidirana, Tsindrio ny bokotra hoe "Ampio ny asa fanompoana"
4. Ao amin' ny combo “–Misafidiana asa fanompoana–“, safidy “afraid.org”
5. Any amin' ny sahan' ny manan-Danja(?) Apetaho ny fanalahidy ho an' ny subdomain nahary ny dingana 1.
Jereo ny fomba hahazoana ny manan-danja ao amin' ny dingana 2: “Fahazoana ny fanalahidy (Manan-Danja) ao amin' ny afrai.org”
6. Tsindrio ny bokotra “pdate ireo fampahalalana tantara”
Dingana 4 – Configuring DNS-O-Matic amin' ny router
Makà ny toe-javatra miseho manaraka ity:
Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > DDNS > Solosaina foibe > WWW.DNSOMATIC.Miaraka amin' ny
Toe-Javatra avo lenta > FAHARERAHANA > DDNS > Solosaina foibe > WWW.DNSOMATIC.COM
1. Ao amin' ny “Solosaina foibe”, Safidio ny WWW.DNSOMATIC.COM
2. Ao amin' ny “Anaran' ny mpampiantrano”, toerana “all.dnsomatic.com” (na mandao banga)
3. Ao amin' ny “Solonanarana na ny Adiresy e-mail”, ampahafantaro ny mpampiasa nohariana araka ny DNS-O-Matic
4. Ao amin' ny “Tenimiafina na DDNS manan-Danja”, ampandreneso hihevitra tenimiafina-O-Matic ny DNS
5. Nony farany, Tsindrio ny bokotra hoe “Fampiharana”
Jereo ny Sary:
Ny fanaovana izany, Router ny DDNS/Asus, amin' ny alalan' ny DNS-O-Matic, ho azy dia hanova ny IP FAHARERAHANA amin' ny alalan' ny Afraid.
fa, Ankehitriny dia manana iray nanatonan' maimaim-poana amin' ny IP nohavaozina foana ianao! Na oviana na oviana ny Tsia-ip, DyDNS na oviana na oviana.
Total isan'ny Hits: 21792
28 Janoary 2017 Taylor Lopes	natahotra, ASUS, tetezana, DDNS, DNS-o-matic, dnsomatic, DynDNS, freedns, modem, NAT, tsia-ip, router, Technicolor
4 hevitra “Fikirakirana ny DDNS ny mifamadika amin' ny alalan' ny modem + router”
Euris nanao hoe::
Tsy mamorona sehatry ianao.
7 Aogositra 2018 ny 15:35
Leandro Santos (Rohy) nanao hoe::
Atleta eo amin' ny Toby malalako!
Niezaka nandritra ny fotoana ela aho mba hanaovana ny asa router sy ny fanampianao fa mora be izany..
Tao anatin' ilay DDNS izay nampiasaiko avy tamin' Asuscomm.com.
10 Septambra 2018 ny 0:08
LUIZ GUSTAVO MENDES MOREIRA nanao hoe::
Manahoana. Toby lehibe, na izany aza dia mampiasa fitsipi velona aho ary raha mametraka fomba anaty tetezana aho dia manaisotra ny tsipika an-tariby sy lavitra ny fanohanan' ny modem.. Fantatrao ny fomba hanaovana izany amin' ny fomba hafa?
7 Aprily 2020 ny 11:50
Bruno nanao hoe::
Manana olana toy izany aho.. Nanangona mba hamahana?
3 mey 2020 ny 11:12
Copyright © 2021 taylorlopes.com satria Oct 2012, 3.004.542 fidirana